संसारकै धनि व्यक्ति एलन मक्सको यस्तो छ रोचक जीवनी
विश्व अर्थतन्त्रका लागि खराब मानिएको वर्ष सन् २०२० मा समेत सबैभन्दा धेरैले सम्पत्तिको मूल्य बढेका एलन मस्क नयाँ वर्ष २०२१ को ६ दिन नबित्दै संसारकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिमा उक्लिए ।
एलन मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी-क्यानेडाली-अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, लगानीकर्ता, ईञ्जिनियर र अन्वेषक हुन्। उनि सन् २०१७ देखि लगातार धनाढ्यको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएका इ-कमर्स तथा क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी अमेजनका सीइओ जेफ बेजोसलाई उछिनेर गत बिहीबार पहिलो नम्बरमा आएका हुन् ।
फोर्ब्सका अनुसार उक्त दिन उनको खुद सम्पत्ति १८९.७ अर्ब डलर बराबरको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार भने बेजोसलाई उछिनेको दिन मस्कको सम्पति १८८ अर्ब डलर पुगेको थियो। यस्तै, बीबीसी र सीएनबीसीले यो रकम १८५ अर्ब डलर उल्लेख गरेका छन् ।
ब्लुमबर्ग बिलेनायर इन्डेक्सका अनुसार त्यसयता पछिल्लो चार दिनमा नै मस्कको सम्पत्तिमा झन्डै २१ अर्ब डलरले वृद्धि भएर अहिले २०९ अर्ब डलर पुगेको छ । फोर्ब्सले पनि पछिल्लो एक हप्तामै मस्क थप ३४ अर्ब डलरले धनी भएको उल्‍लेख गरेको छ ।
गत बिहीबार मस्कको कम्पनीको सेयर मूल्यमा ७.९ प्रतिशतको उछाल आउँदा उनले विश्वका धनाढ्यको सूचीको एक नम्बरमा फड्को मारेका उनको खुद सम्पत्तिमा त्यसअघि पनि २०२१ जनवरी ६ सम्ममा (२०२० जनवरी ६ को तुलनामा) झन्डै साढे पाँच सय प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
डिसेम्बर २०१६ मा, एलेन फोर्व पत्रिकाको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा २१ औं स्थानमा थिए। जनवरी २०१८ सम्म, एलेनको जम्मा २०.९ अरब अमेरिकी डलरको सम्पत्ति थियाे, र फोर्ब्सले विश्वको ५३ औं धनी व्यक्तिको रूपमा सूचीबद्ध गरेको थियाे।
एलनले भनेका छन कि सोलरसिटी, टेस्ला र स्पेसएक्सको लक्ष्यहरु संसार र मानवतालाई परिवर्तन गर्ने रहेकाे छ। उनीहरूको लक्ष्यमा दिगो ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग मार्फत ग्लोबल वार्मिंग घटाउने, र मंगल ग्रहमा मानव बस्ती स्थापना गरेर ‘मानव विलुप्तिको खतरा’ लाई कम गर्ने समावेश छ।
२८ जून १९७१ को साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा जन्मेका उनका बुबा ईन्जिनियर थिए र आमा मोडेल थिइन् ।जब एलन ९ बर्षको थियो, उनका आमा-बुबाले सम्बन्धविच्छेद गरे र एलन आफ्नो बुबाको साथ प्रिटोरिया सरे। उनका एक जना कान्छो भाइ र बहिनी पनि थिए जसलाई उसको बाबुले ध्यान दिदैनथे।
एलन लजालु थिए र बाल्यकालदेखि नै पुस्तकहरू पढ्नमा रुचि राख्थे, अधिकाँश समय उनि पुस्तक पढेर विताउथे, उनले १० वर्षको उमेरमा यतिधेरै पुस्तक पढेका थिए कि त्यति त बयस्क उमेरका कलेजका विद्यार्थीहरू पनि पढेका थिएनन्। १२ वर्षको उमेरमा एलनले कम्प्युटरमा केही पुस्तकहरू आफ्नाे घरमा राखेका थिए। किताबकै माध्यमबाट कम्प्युटर प्रोग्रामिंग सिकेर उनले ‘ब्लास्टर’ नामक खेलको विकास गरेका थिए।
यस भिडियो खेललाई आधारभूत ल्याङ्गुइजमा बनाइएको थियो र यस खेललाई उनले एक कम्पनीलाइ ५०० डलरमा बेचे। यो पैसाले उनले आफ्नो स्कुलको फि तिरेका थिए । तर उनलाई उनका स्कुलका बदमास बच्चाहरुले पिट्ने गर्दथे । यसरी पिटाई खाने क्रममा एक पटक ती बदमासहरुले एलनलाई यत्ति धेरै पिटे कि उनी बेहोश भए।
र यस पछि, एलनलाई सिढीबाट उनिहरुले तल फ्याँकिदिए, उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो र निको हुन धेरै समय लाग्यो। धेरै पछिसम्म पनि यस घटनाको कारण उनलाइ सास फेर्न गाह्रो भएको थियो, दक्षिण अफ्रिकाबाट १७ वर्षको उमेरमा अरुको जस्तै उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय सकियो।
उनी १९८८ मा क्यानाडा सरे। हाल उनी सौर शहरको टेस्ला मोटर्सका सीईओ र मुख्य उत्पाद वास्तुकारका साथै स्पेस एक्सको सीईओ र सीटीओ हुन्। एलन मस्कको फाल्कन हेवी रकेट डिजाईन र निर्माणमा ठूलो योगदान छ, यसैले धेरै जसो मानिसहरू पनि उसलाई फाल्कन रकेटका लागि चिन्छन्।
एलन मस्क र उनका भाइले १९९५ मा जिप२ नामको सफ्टवेयर कम्पनी खोले। तर १९९९ मा उनले कम्पनी बेचे र करोडपति भए। पछि, उनले एक्स डट कम नामको कम्पनी खोले, तर केही समय पछि उनले यसलाई कन्फिनिटीको कम्पनीमा सम्मिलित गरे र यी दुई कम्पनीहरू एकसाथ भएपछि उनीहरूले पेपाल नामको नयाँ कम्पनी गठन गरे।
एक्स डट कम लाई पछि पेपाल नाम दिइयो र यसलाई नाम दिए पछि इलोन मस्कले कम्पनीको विस्तार गर्नमा जोड दियो। त्यसपछि उनले स्पेसएक्स कम्पनी खोले र टेस्लाको सीईओ बने।
उनी २००२ मा अमेरिकी नागरिक बने।
एलन मस्कले बचपनदेखि नै अविश्वसनीय कामहरू गर्न शुरू गरे। उसको यस्तो अद्भुत काम गर्ने अवधि अझ अगाडि बढ्यो। उनका धेरै कामहरूमा फाल्कन रकेट संलग्न छ। एलन मस्कले आफैंले यो रकेटको डिजाईन डिजाइन गरेको छन् र यसै समयमा उनले यस ठूलो मिसनलाई सफल बनाउन अधिकतम योगदान पुर्‍याएको छन्।
बीबीसी संवाददाताले मस्कसँगको साक्षात्कारमा ‘तपाईंको सफलताको रहस्य के हो’ भनी सोधेका थिए। मस्कको व्यवसायप्रतिको ‘एटिच्युड’ अर्थात् व्यापार तथा आफ्नो कामका बारेमा उनको फरक दृष्टिकोण। केही वर्षअघिको साक्षात्कारमा मस्कले भनेका थिए, ‘‘मलाई थाहा छैन, मसँग कति सम्पत्ति छ। यसलाई नोटको बन्डलमा गन्न सकिँदैन। यसलाई हेर्नुपर्छ र टेस्ला, स्पेस-एक्स तथा सोलर सिटीमा मेरो हिस्सा छ अनि बजारमा त्यो हिस्सेदारीको केही मूल्य पनि छ। तर, यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन, किनकि मैले काम गर्नुको लक्ष्य त्यो होइन।’’
संवाददाताले लेखेका छन् कि, सायद मस्कको त्यही दृष्टिकोणले उनलाई सफलताको शिखर चढाइरहेको छ। उनीसँग आज यति सम्पत्ति छ, संसारका सबै ठूला कार निर्माता कम्पनीलाई उनी एकै पटक खरिद गर्न सक्छन्।
यो वर्ष उनी ५० वर्षका हुनेछन्। तर, एक धनाढ्य व्यक्तिका रूपमा नाम कमाएर संसारबाट बिदा हुने उनको सपना बिलकुल छैन। मस्क मंगलग्रहमा एक बेस बनाउन आफ्नो पुँजीको ठूलो हिस्सा लगाउन चाहन्छन्। उनी आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति यो काममा लगाउन समेत तयार छन्। मंगलग्रहमा मानिसको एक बेस, मस्कको नजरमा सबैभन्दा ठूलो सफलता यही हुनेछ। यसबाट मानिसको भविष्य सुखद हुने उनको विश्वास छ।
उनले बीबीसीसँग भने, ‘‘मैले यो कम्पनी यसकारण बनाएँ, किन अमेरिकी स्पेस एजेन्सी अन्तरीक्ष अन्वेषणका विषयमा महत्वाकांक्षी छैनन्” यसमा म असन्तुष्ट थिएँ। अमेरिका किन भविष्यका बारेमा सोचरिहेको छैनरु म विश्वास गर्छु, भविष्यमा चन्द्रमा तथा मंगलग्रहमा हाम्रो बेस हुनेछ र त्यहाँ नियमित उडान चल्नेछ।’’
‘‘मानिसहरू बिनाकारण टेस्ला डुबोस् भन्ने कामना गरिबस्छन्। तर, म आलोचनाका कारण आफ्नो विचार परिवर्तन कहिल्यै गर्दिनँ। जब मैले स्पेस-एक्स र टेस्लामा पाइला राखेँ तब पैसा कमाइएला भन्ने सोचेको थिइनँ।’’
बैंकमा रहेको पैसालाई उनले कहिल्यै सम्पत्ति मानेनन्। उनी आफूलाई लगानीकर्ता भन्नुभन्दा पनि एक इन्जिनियर भन्न रूचाउँछन्। उनले भने, ‘‘म हेरक बिहान कुनै न कुनै नयाँ प्राविधिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि उठ्न चाहन्छु।’’
मस्क कार उद्योगमा क्रान्ति ल्याउन चाहन्छन्, मंगलग्रहमा कोलोनी बनाउन चाहन्छन्। भ्याक्युम टनेलमा चल्ने सुपरफास्ट रेल चलाउन चाहन्छन्, मानव दिमागमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जोड्न चाहन्छन्। र, सौर्यऊर्जाबाट संसार चलाउन चाहन्छन्।
मस्कलाई सुस्त परिवर्तनमा बिलकुलै विश्वास छैन। उनी चाँडोभन्दा चाँडो जिवाश्म इन्धनलाई हटाएर सौर्यऊर्जा ल्याउन चाहन्छन्। साथै, मानवताको अस्तित्वलाई लामो समयसम्म टिकाउन मंगलग्रहमा उपनिवेश विकसित गर्न उनी अघि सरेका छन्।
जोखिमसँग खेल्ने रूचि
मस्कलाई जोखिमसँग खेल्न खुबै मन पर्छ। जब २००८ मा संसार आर्थिक मन्दी भोगिरहेको थियो, तब उनको अवस्था पनि निकै खराब थियो। उनले आफ्ना नयाँ कम्पनीमा ठूलो असफलता भोगे। स्पेस-एक्सको पहिलो तीन लन्च असफल भयो। टेस्लामा पनि समस्या आयो, उनी चिन्तित भए। यतिसम्म कि, उनले आफ्नो दैनिक खर्च जुटाउन पनि साथीसँग सापटी लिनुपर्‍यो।
त्यति हुँदा पनि उनी डराएनन्। उनले संवाददातासँग भने, ‘‘बढीभन्दा बढी के हुन्थ्यो, मेरा सन्तानले सरकारी विद्यालयमा पढ्न जानुपथ्र्यो। यो कुनै ठूलो कुरा हुने थिएन। म पनि त सरकारी स्कुलमै पढेको हुँ।’’
आधारहीन आलोचनाले मस्कलाई खुबै निराश बनाउँछ। ‘‘मानिसहरू बिनाकारण टेस्ला डुबोस् भन्ने कामना गरिबस्छन्। तर, म आलोचनाका कारण आफ्नो विचार परिवर्तन कहिल्यै गर्दिनँ। जब मैले स्पेस-एक्स र टेस्लामा पाइला राखेँ तब पैसा कमाइएला भन्ने सोचेको थिइनँ,’’ उनी भन्छन्।
सातामा १२० घण्टा काम
मस्कलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी सातामा १२० घण्टा काम गर्ने बताउँछन्। उनलाई जति बढी काम गर्‍यो त्यति नै आनन्द आउँछ।
कोरोना महामारीका कारण उनको सनफ्रान्सिस्कोस्थित उद्योग बन्द गर्नुपर्‍यो। उनले त्यसबखत लकडाउनमा अपनाइएका प्रतिबन्धको विरोध गरे। उनले भने, ‘‘जसले कोरोना महामारीलाई हौवा बनाएको छ, ती मानिस बेबकुफ हुन्।’’ लकडाउनमा घरभित्र बस्न दिइएको आदेशलाई उनले ‘जबर्जस्ती’ बताए। ‘‘कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन संवैधानिक अधिकारविरुद्ध हो,’’ उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
मानिसहरू मस्कको मन पढ्न नसकिने र उनको व्यवहारको पूर्वानुमान पनि गर्न नसकिने बताउँछन्। तर, यसको प्रभाव उनको काममा बिलकुलै देखिँदैन। उनी एक उद्यमी त हुन् नै एक दूरदर्शी मानिस पनि हुन्।
२०२० सेप्टेम्बरमा उनले चाँडै नै आफ्नो कम्पनीका सबै कार ‘सेल्फ ड्राइभिङ’ हुने बताएका थिए। उनी आगामी तीन वर्षमा सस्तो इलेक्ट्रिक कार बनाउने योजनामा छन्।
Tagsएलन मक्स संसारकै धनि व्यक्ति
नेपालमा फोरजीको प्रयोगकर्ता ६३ लाख नाघ्यो
बिल गेट्स बने अमेरिकाकै ठूला जमिनदार
सुनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो : तोलाको कति ?
अब करारमा कर्मचारी राख्दा कार्यपालिकाको सहमति चाहिने
केपी ओली भगुवा नेता हुन्ः भीम रावल
ओलीको दाबीः मेरा कदम लोकतन्त्रका पक्षमा छन
सञ्चारकर्मी पौडेल र थापाको ‘बेसारे माया’ सार्वजनिक (भिडियो)
मर्न तयार छु, तर कुनै हालतमा झुक्दिनँ : प्रचण्ड
कोरोनाका कारण विदेशमा ३१९ नेपालीको मृत्यु
खराब कर्जा के हो, यससम्बन्धि कानूनी व्यवस्था के छ ?
ओली र पौडेल साधारण सदस्यकै लागि अयोग्य
स्टार म्याराडोना : फुटबलका बादशाह (जीवनी)